के हो डुसेन्ट मस्कुलर डिस्ट्रोफि ? | Hamro Doctor News
दोलखा स्थायी घर भएर ललितपुरको लगनटोल बस्दै आएका पुष्प भण्डारीका छोरा सञ्जय ७ वर्षको भएपछि एक्सासी खुट्टा बाङ्गो गरेर हिड्ने, हिड्दा लड्ने समस्या देखियो । छोरामा यस्तो समस्या देखिएपछि चिन्तित भण्डारी पाटन अस्पताल पुगे । सञ्जयको रगत जाँच पछि डुसेन्ट मस्कुलर डिस्ट्रोफि भएको पुष्टि भयो ।
चिकित्सकले यसको उपचार हुँदैन तर, यसलाई कम गर्न फिजियोथेरापी गर्नु सकिन्छ भने । बाबुको मन न हो, छोराको उपचारका लागि अन्य अस्पताल जाने निधो गरे । छोराको उपचारको लागि उनी ललितपुरकै निदान अस्पताल पुगे । त्यहाँ पनि चिकित्ससले त्यहि उत्तर दिए । तर, पनि उनले हरेस खाएनन् । उनी नयाँ नयाँ अस्पताल धाइरहे । आधुनिक चिकित्सामा मात्र नभई उनी आयुर्वेद उपचार र थेरापिका लागि धेरै ठाउँ पुगे । अन्तिममा अहिले सञ्जयको फिजियोथेरापी मस्कुलर डिस्ट्रोफी फाउण्डेसन कुपण्डोलमा भइरहेको छ ।
यस्ता अन्य थुप्रै अभिभावक आफ्नो छोराको उपचारका लागि फाउण्डेशनमा आउने गरेका छन् । विश्वममा मस्कुलर डिस्ट्रोफिको संख्यालाई हेर्ने हो भने तीन हजार पाँच सयमा एक जना पुरुषमा यो समस्या देखिन्छ । नेपालमा भने यसको कुनै अध्ययन र सर्वेक्षण भएको छैन । मस्कुलर डिस्ट्रोफि फाउण्डेशनमा भने अहिलेसम्म करिब सात सय बिरामी दर्ता भएका छन् ।
के हो मस्कुलर डिस्ट्रोफि ?
मानिसको जीनबाट मांसपेशीमा पैदा गर्ने विकृतिलाई मस्कुलर डिस्ट्रोफि भनिन्छ । यो एक जेनेटिक (वंशाणुगत) रोग हो । मानिसको शरीरको बनोट बनाउन नियन्त्रण ‘जीन’ ले गर्छ । मस्कुलर डिस्ट्रोफि गराउन विकृत जीनले मांसपेशीमा सुक्ष्म परिवर्तन ल्याई बढी मात्रामा क्षीण तथा कमाजोर बनाउँदै लान्छ । मस्कुलर डिस्ट्रोफीले मांसपेशी कमजोर हुँदै गएर समस्या उत्पन्न गराउँछ । मस्कुलर डिस्ट्रोफि विभिन्न प्रकारको हुन्छ । यो ४०÷५० थरीको हुन्छ । जसमध्ये कुनै कुनै मस्कुलर डिस्ट्रोफि यति समान्य हुन्छ कि यसको बारेमा थाहा पाउनै सकिँदैन । कुनै भने ज्यान लिने खालको हुन्छ । यसले गर्दा सामान्य आयु पनि बाँच्न पाइँदैन । यसमध्ये डुसेन्ट मस्कुलर डिस्ट्राफि भएकाको भने औषत आयु २० वर्षको हुन्छ ।
डा. पोख्रेलसँग बासुदेव न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित
Last modified on 2016-06-16 16:55:20